ကလိုစေးထူး: ငါ...ပြိုင်ပွဲ (၂)
Feb 19, 2009, 11:48:00 PM
မိုက်တယ်ဗျာ။ ငါပြိုင်ပွဲ(၁)ကိုပါ ဖတ်လိုက်တော့ ပိုလို့တောင် ပြည့်စုံသွားသေးတယ်။
ကိုစေးထူး အတွေးတွေက လန်းတယ်ဗျို့ 
ငါစားစားနိုင်ပါမှာ ။၁ ကိုပြန်ဖတ်မိတော့ အစပ်ဟပ်တည့်သွားတယ် ဒီတိုင်းဆို ဘာပါလိမ့်ဖြစ်နေအုံးမှား)
"ငါ" ဆိုတာရေးပြီးရင် "များ" ဆိုတာလေးပါ ထပ်ရေးပါလားဟင်...ခွိခွိ။
Feb 20, 2009, 5:36:00 AM
ကိုစေးထူးရဲ့ “ငါ”က ဧရာမကြီးပါလား။း-)
Feb 20, 2009, 6:43:00 AM
Feb 20, 2009, 7:22:00 AM
something about "ငါ" as well...
don't know the author, found it on the internet. Sorry for not able to give credit..
သူကျတော့တစ်ဖက်ကမ်းခတ်တော်တာ ငါကျတော့ တစ်ဖက်စွန်းရောက်တာ သူ့ကိုကျတော့ချီးကျူးတာ ငါ့ကျတော့ မြောက်ပြီးခိုင်းကြတာ သူကျတော့ လိမ်မာပါးနပ်တာ ငါကျတော့ ကောက်ကျစ်တာ သူညာတာက ပရိယာယ်သုံးတာ ငါညာတာကလှည့်ဖျားတာ သူကျတော့ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ ငါကျတော့ မှတ်ညန်နည်းတာ သူ ကျတော့ သြဇာရှိတာ ငါကျတော့ ကြီးကျယ်တာ သူကျတော့ ခန်းနားတာ ငါကျတော့ အယောင်ဆောင်တာ သူ ကျတော့ နူးညံ့ သောအပြုံးငါ့ကျတော့ မျက်နှာဖုံး သူချစ်တာကျတော့ romantic lover ငါချစ်တာကျတော့ နွားကျတာ အော် တရားကျလိုက်တာ နော်
Feb 20, 2009, 9:47:00 AM
ငါ ဆိုတာပြိးရင် ငါ့မိသားစု ဆိုတာ ထပ်ရေးမှာပါ ။ မပူပါနဲ့ ကိုမျိုးမြင့်မောင်ရယ်...အဟိန်းဟိန်း
ငါကို အကြီးမားဆုံး installation လုပ်ထားတာပေါ့လေ...
Performance တွေ လုပ်နေတာလား။ ပုထုဇဉ်တွေမို့ ငါ တွေနဲ့ ဘယ်သူမှ မကင်းနိုင်သေးတော့ အဲဒါကြည့်ပြီး နည်းနည်းတော့ ငါ ငါ ငါ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်ရှိန်သပ်မိတာပေါ့။ အမတို့လဲ ဒီဝဲထဲက မထွက်နိုင်သေးဘူးပဲလေ။
အမ တယောက်တည်း အမြင်ကို ပြောရရင် စာလာဖတ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့စာလေးတွေ ဆီက ရသပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သုတပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ချမ်းသာမှုလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုချင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ မအားလဲ အားတဲ့အချိန်လေး ပြေးလာမိတာပါပဲ။ အဲဒီလို ဖြူစင်တဲ့ မျှော်လင့်ချက် လေးနဲ့ စာလာဖတ်တာပါပဲ။ ကိုစေးထူးတို့ ရေးမဲ့ စာတွေကို အမကတော့ အချင်းချင်း အငြင်းပွားတာထက် ပိုမျှော်လင့်နေမိတာဆိုရင် အမ တယောက်တည်း ဆန္ဒပါပဲ။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ ခင်ရ၊ ဆုံရတာ မမြင်ဖူး မဆုံဖူးပေမဲ့ ကိုယ့်မောင်ရင်း နှမလို ခင်မိကြတာဆိုတော့ ပြောမိတာပါ။ လွန်တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
Feb 20, 2009, 11:53:00 AM
ငါ ၃ ကို ပထမရအောင် စောင့်လိုက်ဦးမယ်
Feb 20, 2009, 1:08:00 PM
ဟဲဟဲ..."များ" ဆိုတာလေး ရေးခိုင်းတာ ထမီခြုံငကြောက်တွေကိုလည်း တရားရစေချင်လို့ပါဗျာ...ဟဲဟဲ။
Feb 20, 2009, 8:56:00 PM
Chicken နဲ့ ငါ
Chicken ကျတော့ အမှန်တရားကို ကိုင်ပြောတာ
ငါကျတော့ ငါ့စကားနွားရ ကပ်ပြောတာ
Chicken ကျတော့ အမြင်မတော်လို့ ဝေဖန်တာ
ငါကျတော့ အမြင်မကြည်လို့ ဝေဖန်တာ
Chicken ကျတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဒဲ့တိုးကျတာ
ငါကျတော့ မိုက်မိုက်ရိုိင်းရိုင်း အောက်တန်းကျတာ
Chicken ကျတော့ တရားကို မင်တာ
ငါကျတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ခင်တာ
Chicken ကျတော့ ဘက်စုံထောင့်စုံအောင် ပြောတာ
ငါကျတော့ မယောင်ရာဆီလူး ပြောတာ
Chicken ကျတော့ ဗဟုသုတ ကြွယ်တာ
ငါကျတော့ ငါသိငါတတ် ကြွားတာ
Chicken ကျတော့ စာမဖတ်ပဲ အမြင်မှန်တာ
ငါကျတော့ စာတွေဖတ်ပြီး အမြင်စောင်းတာ
သြော်...တရားကျလိုက်တာ နော်။ ဆင်စွယ်နန်းကတော့ အမြင်တကယ်ဆန်း ပါတယ်ဗျာ...ဟားဟား။
အမှန်တရားကို ရေးပြနေတုန်းက အမှန်တရားကို ပြောလွန်းရင် ရွာပြင်ထုတ်ခံရလိမ့်မယ်နော်လို့ (သူထုတ်ချင်နေတာကို ရွာထဲကလူတွေနာမည်သုံး မရိုးမသား ခုတုံးလုပ်) လာရောက်ခြိမ်းခြောက်သွားခဲ့ပြီး “ငါ” ဆိုတာလေး တလုံးရေးပြတာကို မြင်တော့မှ တရားရသွားတတ်ရှာတဲ့ တရားရှင် ပါရမီရှင် သဘောဖြူ အူစင်းလေးတွေလည်း လောကကြီးမှာ ရှိတတ်ပါလားလို့ တရားရမိပါတယ်။း-)
Feb 20, 2009, 9:48:00 PM
ဟင်း... သူ့ ငါ ကလည်း လုပ်ထားတာ မညီမညာနဲ့။
Feb 21, 2009, 4:55:00 AM
Feb 21, 2009, 11:25:00 AM
haha, I can't even leaveasingle comment here without being attacked from Ko Paw & MMM's team :P
Ko Kolosaehtoo, i will enjoy quitely ur blog in the future...
Feb 22, 2009, 4:34:00 PM